इन्टरनेट मन्त्रालयहरू - कसरी ख्रीष्टको चर्चको सदस्य बन्न सक्छ?
कसरी ख्रीष्टको मण्डलीको सदस्य बन्न सक्छ?
मानिसको आत्माको उद्धारमा2आवश्यक भागहरू छन्: परमेश्वरको भाग र मानिसको भाग। ईश्वरको अंश ठूलो भाग हो, "कृतज्ञताको निम्ति तपाईंले विश्वासको माध्यमबाट बचाउनुभएको छ, र त्यो आफैंको होइन, यो भगवान हो, कामहरूको होइन, कि कुनै मानिसले महिमा गर्नु पर्छ" (एफिसी 2: 8-9)। मानिसको लागि परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएका प्रेमले उहाँलाई मानिसलाई उद्धार गर्न ख्रीष्टलाई पठाउन प्रेरित गर्यो। येशूको जीवन र शिक्षा, क्रूसमा बलिदान, र मानिसहरूलाई सुसमाचारको घोषणा उद्धारमा परमेश्वरको भाग हो।
यद्यपि परमेश्वरको भाग ठूलो भाग हो, मानिस मानिस स्वर्गमा पुग्न यदि आवश्यक हुन्छ। मानिसलाई क्षमाको नियम पालन गर्नु पर्छ जुन परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको छ। मानिसको भाग स्पष्ट रूपमा निम्न चरणहरूमा सेट गर्न सकिन्छ:
सुसमाचार सुन्नुहोस्। "उनीहरूले कसरी उहाँलाई बोलाउनेछन्, तिनीहरूले विश्वास गरेनन्? र तिनीहरूले विश्वास गर्नेहरूलाई कसलाई सुनेनन् र तिनीहरूले कसरी प्रचारक बिना सुन्न सक्छन्?" (रोमन 10: 14)।
विश्वास गर्नुहोस्। "र बिना विश्वास बिना यो असंभव छ कि उहाँप्रति प्रसन्न रहनु, किनकि उहाँकहाँ आउनुहुने परमेश्वरलाई विश्वास छ कि उहाँ उहाँ हुनुहुन्छ, र उहाँ उहाँको खोजी गर्ने उनीहरूको इनामदार हुनुहुन्छ" (हिब्रू 11: 6)।
बितेका पापहरूको पश्चात्ताप। "अज्ञानताको समयमा परमेश्वरले अचानक अनदेखी गर्नुभयो, तर अब उहाँले मानिसहरूलाई आज्ञा दिनुहुन्छ कि तिनीहरू सबै पश्चात पश्चात पश्चात्ताप गर्नु पर्छ" (प्रेरित 17: 30)।
येशूलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। "हेर, यहाँ पानी छ; मैले बप्तिस्मा लिने कोसिस गरे? फिलिपले भने," यदि तिमी सबै हृदयले विश्वास गरिरहेछौ भने तिमीहरूको पुण्य हो। "उहाँले जवाफ दिनुभयो," म विश्वास गर्छु कि येशू ख्रीष्टको पुत्र हुनुहुन्छ "(प्रेषित 8: 36 -37)।
पापहरूको छुटकाराको लागि बप्तिस्मा लिनुहोस्। "अनि पत्रुसले तिनीहरूलाई भने," तिमीहरूलाई पछ्याउनुहोस्, र ख्रीष्टको नाममा सबैलाई बप्तिस्मा गर, तिमीहरूका पापको निम्ति र तिमीहरू पवित्र आत्माको उपहार पाउनेछौ "(प्रेरित 2: 38)।
मसीही जीवन बिताउनुहोस्। "तपाईं एक चुनाव, एक शाही पुजारीको आश्रम, एक पवित्र जाति हो, परमेश्वरको आफ्नै स्वामित्वको लागि मान्छे हो, जसले तपाईलाई अन्धकारबाट बाहिरको उनको अद्भुत रोशनीमा बुलायो" (1 पत्रुस 2: 9)।
को के ख्रीष्टका चर्चहरू हुन्?
ख्रीष्टको चर्चको विशिष्ट दलील के हो?
बहाली आंदोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
ख्रीष्टका कति चर्चहरू त्यहाँ छन्?
चर्चहरू कसरी संगठनात्मक रूपमा जोडिएका छन्?
ख्रीष्टका मण्डलीहरू कसरी शासन गरिन्छ?
बाइबलको बारेमा ख्रीष्टको चर्चले के विश्वास गर्छ?
के ख्रीष्टियनहरूका सदस्यहरू कुमारी जन्ममा विश्वास गर्छन्?
के ख्रीष्टको चर्च भविष्यवाणीमा विश्वास छ?
किन ख्रीष्टको चर्चले विनाश गरेर बप्तिस्मा दिन्छ?
के शिशु बप्तिस्मा प्रयोग गरिन्छ?
के चर्चका सेवकहरूले विश्वास सुन्नेछन्?
प्रार्थनाहरू अभिलेखालयहरूलाई सम्बोधन गर्दै छन्?
प्रभुको भोजन कति पटक खाएको छ?
उपासनामा कस्ता प्रकारको संगीत प्रयोग गरिन्छ?
के ख्रीष्टको मण्डली स्वर्ग र नरकमा विश्वास गर्दछ?
के ख्रीष्टको चर्चले विरूद्ध विश्वास गर्दछ?
चर्चले कसरी आर्थिक सहयोगलाई सुरक्षित बनाउँछ?
के ख्रीष्टको चर्चले सृष्टि गरेको छ?
Spearman, टेक्सास 79081